Hälsobesök på BVC i VGR - 1177
Hälsobesök på barnavårdscentralen i Västra Götaland - somaliska
Hälsobesök på barnavårdscentralen i Västra Götaland - somaliskaThe content concerns Västra Götaland
Content - Kulanak daryeelka caafimaadka ee ka dhaca rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC
0-14 maalmood booqashad ugu horeysa
Marka uu dhasho ilmahaagu waxaa aad la xidhiidhi doontaa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka ee qaabilsan ilmahaaga (BVC) ee aad dooratey. Kulanka ugu horeeya ee lala yeesho rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka waxaa uu qabsoomaa sida caadiga ah labo todobaad ka dib marka uu ilmaha guriga yimaado.
BVC: 2-8 todobaad
Marka uu ilmuhu jiro inta u dhaxeysa 2 iyo 8 todobaad, waxaa aad kula kulmi doontaan rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC kalkaalisda caafimaadka, mudooyinka ugu horeeya waxaa aad la kulmi doontaan todabaadkiiba hal mar ka dinbna labadii todobaadba hal mar taas oo ku xidhan baahida aad qabtaan.
BVC: 6 bilood - booqasha kooxda isku jirta kalkaalisada caafimaadka iyo dhakhtarka
Marka uu ilmuhu jiro 6 bilood waxaa aad la kulmi doontaan kalkaalisad caafimaadka iyo dhakhtar labadaba.
BVC: 8 bilood
Marka uu ilmuhu jiro 8 bilood waxaa guriga idinku soo booqan doonaa kalkaalisada caafimaadka oo ka socota rugta daryeelka caafimaadka BVC. Waxaa uu ilmumu heli doonaa fursad lagu baadho isaga oo jooga gurigiisa.
BVC: 10 bilood
Marka uu ilmuhu jiro 10 bilood waxaa aad kula kulmi doontaan kalkaalisada caafimaadka rugta daryeelka caafimaadka BVC. Waxaa si wadajir ah looga hadli doona arimo ku saabsan ilmaha isla markaana waxaa kale oo la tix raaci doonaa waxyaabihii laga hadley kulanadii hore.
BVC: 1 sano – booqasha kooxda isku jirta kalkaalisada caafimaadka iyo dhakhtarka
Marka uu ilmuhu jiro 1 sano waxaa aad la kulmi doontaan kalkaalisad caafimaadka iyo dhakhtar labadaba.
BVC: 18 bilood
Marka uu ilmuhu jiro 18 bilood waxaa lala kulmi doonaa kalkaalisada caafimaadka, waxaa kulanka booqashada aan kaga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa. Waxaa kale oo la tix raaci doonaa waxyaabihii laga hadley kulanadii hor.